Booliska Archives - Sawirrotv
Diyaaradaha Dron’ska oo Loogu Deeqay Booliska Soomaaliya (SAWIRRO)
Booliska Soomaaliya ayaa helay markii ugu horeysay dayuuradaha qumaatiga u kaca ee drones-ka loo yaqaan. Sarkaal ka tirsanaan jiray sirdoonka dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Brett Velicovich ayaa Wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in diyaaradahan oo shan ah ay ugu deeqeen booliska Soomaaliyeed si ay ugu adeegsadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada. Diyaaradahan ayaa la sheegay …
Ciidamada Booliska oo Maanta loo Keenay gawaari iyo Mootooyin Cusub (SAWIRRO)
Ciidamada Booliska ee dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegay qalab Booliska loogu deeqay oo ka yimid dowladda Japan oo ka mid ah dowladaha taageera ciidanka Booliska Somaliyed. Qalabkaan oo isugu jira gaadiidka ciidanka ay isticmaalaan iyo Mootooyinka dheereeya iyo qalab kale, waxaana deeqdani la wareegay Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed, General C/xakiin Daahir Saciid …
Booliska oo Gacanta ku Dhigay Wiil Tooray ku Dilay Wiil Kale oo Dhalinyaro ah (DHAGAYSO)
December 24, 2016 – Ciidamada booliska ayaa gacanta ku soo dhigay wiil dhalinyaro ahaa oo wiil kale toorey ku dilay, arintani auyaa ka dhacday duleedka Magaalada Muqdisho. Labada wiil kan la dilay iyo midka dilka geystay ayaa waxa ay wada degan yihiin deegaanka Sarkuusta, gaar ahaan halka ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Sida …
October 18 , 2016 – Taliyaha Ciidamada Booliska, S/Gaas Maxamed Shiikh Xasan Xaamud ayaa maanta Magaalada Muqdisho Tababar uga furay Ciidamo cusub oo Boolis ah, kuwaasi oo loo diyaarinayo inay ka qayb qaataan sugidda amniga xilliyada lagu guda jiro Doorashooyinka dalka. Munaasabadan Tababarka loogu furay Ciidankan ayaa waxaa ka qeyb galay Saraakiil ka tirsan Ciidanka …
Taliyaha Ciidanka Booliska oo Tababar u soo Xiray Ciidan Lagu Tababaray Dalka Uganda (SAWIRRO)
September 10, 2016 –Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa maanta tababar ugu soo xiray dalka Uganda Saraakiil ka tirsan ciidanka Booliska Soomaaliyeed . Saraakiishan ayaa muddo ka badan sanad ayaa waxa ay tababar leyli sarkaal ah ku qaadanayeen dalka Uganda , waxaana tababar la qaadanayay Ciidamo kala socday dalalka Ugand …
Taliska Booliska Gobolka Banaadir oo Sheegay inay Ciidamo gaar ah u Diyaariyeen Doorashooyinkan
August 13, 2016 – Taliska ciidanka booliska ee Gobolka Banaadir ayaa sheegay in la diyaariyay ciidamo gaar ah oo amniga suggidoona marka lagaaro xilliga Doorashooyinkan. Waxaana uu xusay taliyaha inay diyaariyeen ciidamo gaar ah oo ka qayb qaadandoona suggida ammaanka Degmooyinka Gobolka Banaadir, inta lagu gudo jiro Doorashooyinka dalka. Taliyaha ciidamada Booliska Gobolka Banaadir, Bishaar …
Madaxweynaha oo Biladdo Gudoonsiiyay Saraakii ka Qalinjabisay Dusiga Gen. Kaahiye (SAWIRRO)
July 15, 2016 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Xasan Shekh Maxamuud ayaa ka qaybqaatsy munaasabad lagu qabatay Dugsiga Ciidamada Booliska ee Janaral kaahiye, kadib markii halkaasi tabar loogu soo xirayay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed, kuwaas oo uu mudo tabar ugu socday Dugsiga tababarada ciidamada booliska ee janaraal kaahiye. Taliyaha ciidammada Booliiska …
July 08, 2016 –Ciidamada amniga ee Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Howlgal ay ka sameeyeen Masjid ku yaala degmada Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho ku soo qabtay Huba lagu dhex qariyay Masjidka iyo labo qof oo arriintaasi ku lug yeeshay. Taliyaha Ciidanka Booliska ee Saldhigga Degmada Yaaqshiid Gaashanle Dhexe Maxamed Yuusuf Nuur, ayaa warbaahinta u sheegay in …
Taliyaha Ciidanka Booliska oo Xafiiskiisa ku Qaabilay Mas’uuliyiin ka socday Midowga Yurub (SAWIRRO)
June 29, 2016 – Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeye Gaas, Maxamed Sheakh Xasan Xaamud iyo mas’uuliyiin ka socday Midowga Yurub ayaa maanta kulan ku qaatay xarunta akadeemiyadda booliska ee Jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho. Kulankaas ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya booliska Soomaaliyeed iyo Midowga Yurub iyo sidii Midowga Yurub …